“Somaliland waa inay ka Dhacdo Doorasho”Qaramada Midoobay. |
“Somaliland waa inay ka Dhacdo Doorasho”Qaramada Midoobay.
Wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa ka hadlay kulankii uu madaxweynaha dawlada federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu la qaatay Muuse Biixi Cabdi.
Danjire James Swan oo warbixin siinayay Golaha Ammaanka Qaramada ee Midoobay ayaa soo dhaweeyay kulanka uu madaxweyne Farmaajo xafiiska raysal wasaaraha Itoobiya kula yeeshay hogaamiyaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Danjire James Swan oo ka hadlaya kulankii Addis Ababa ku dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi ayaa waxa uu yiri “Horraantii bishan raysal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed wuxuu agaasimay kulan ay yeesheen Madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi,”.
Mr Swan wuxuu intaasi raaciyay in ay waajib tahay in Somaliland doorasho ka dhacdo sanadkan 2020.
“Somaliland waa in ay doorasho ka dhacdo, halka doorashada baarlamaanka in la qabto ay ugu dambeysay 2005, waxaan ku boorrinaya xukumadda iyo xisbiyada siyaasadda si loo helo dariiq looga dhaqaaqo cakirnaanta hadda taaggan, waa in doorashada baarlamaanka iyo goleyaasha degaanku qabsoomaan ka hor dhammaadka 2020,” ayuu yidhi Mr Swan.